कि आफूले गर कि अरुलाई गर्न देऊ
म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिकाअन्तर्गत बेगखोलाका एक चर्चित नाम हो, योगकुमार फगामी । कोमल हृदय, सहयोगी भावना, अर्काको दुःखमा आँसु खसाल्न समेत पछि नपर्ने फगामी कहिल्यै पनि नरिसाउने स्वभावका रुपमा बेलायतमा समेत चिनिइसकेका छन् । उनी गैर आवसीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्ष, बेगखोला कल्याणकारी समाज युके अध्यक्ष, मोना युकेका पूर्वअध्यक्ष, मगर संघ युकेका वरिष्ठ उपाध्यक्षजस्ता थुप्रै संघ संस्थाको जिम्मेवार पद सम्हालेका छन् । प्रस्तुत छ, एभरेस्ट टाइम्सले उनै योगकुमार फगामीसँग समाजसेवा र समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।
मेरो जन्म सिङ्गाइ पटानी बाबा पल्टने अवस्थामा भएको भए तापनि बाल्यकाल म्याग्दी जिल्ला रघुगंगा गाउँपालिका १ वडा बेगखोलामा बित्यो । निमाविस्तरको क्षिक्षा बेगमा नै, मावि भने छिमेकी गाउँ राखुमा सकेँ । त्यसपश्चात् झण्डै दुईवर्ष गाउँको स्कुलमा क्षिक्षक पेसामा रहेँ । र, १९८५ सालमा भर्ती लागियो । १७ वर्षको ब्रिटिस आर्मीको सेवानिवृत्त पछि २००२ देखि बेलायतलाई कर्मथलो बनाएको छु । आमा र श्रीमती, छोरा, बुहारी, छोरी, भान्जालगायत बहिनी ज्वाइँको परिवार र माइतीलगायत इस्टमित्र, नातेदारहरुको ठूलो समूहमा हाम्रो बसोबास बेजिङस्टोमा छ ।
तपाई को हो जस्तो लाग्छ ?
म एक साधारण व्यक्ति । मध्यम परिवारमा जन्मेर बढी परिश्रममा भरोसा गर्ने व्यक्ति हुँ । आफूले दुःख गरेर अरुलाई बढी सहयोग गर्न रुचाउँछु र अरुको दुःखमा सजिलै बग्न सक्ने मेरो स्वभाव छ । अरुलाई पीर पार्न र अनावश्यक वचन दिने स्वभाव छैन । नांगो जन्मेर रित्तै जाने यो प्रकृयामा लोभ र लालच गर्ने मेरो बानी छैन । व्यवहारिकतालाई बढी प्राथमिकता दिन रुचाउँछु र समाजसेवामा बढि मेरो समय बितेको अवस्था छ ।
कुन कुन सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ? सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन कोबाट प्रेरणा पाउनुभयो र किन सामाजिक संस्थामा लाग्नुभयो ?
म अहिले एनआरएनए युके उपाध्यक्ष, मगर संघ युकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा छु । यी दुवै संस्थामा महासचिवको भूमिका निर्वाह गरी संस्थालाई नजिकदेखि चिनेको छु । त्यस्तै मोना युकेको अध्यक्षमा रहँदा एकैपटक तीनवटा एम्बुलेन्स जिल्लामा पुरायौं र अहिले संरक्षक पदमा छु । बेजिङ्गस्टोक नेपाली समाजको स्थापनाकालदेखि सहसचिवको भूमिकामा रहँदै हाल उपाध्यक्ष पदमा छु । सहारा युके सल्लाहाकार हुँ भने इन्टेक ८५ नम्बरी र हाम्रो बेगखोला कल्याणकारी समाज उपशाखा युकेको अध्यक्षमा छु । समाजलाई सेवा गर्ने प्रेरणा एक समयसांपेक्ष पनि हो तर यो सेवामा लाग्ने प्रेरणाको स्रोत मेरो बाबा र आमालाई दिन चाहन्छु ।चेतनशील प्राणी र परिवर्तित समयानुकूल हामीले समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो । अहिले हामीले नगरे कसले अनि कहिले गर्ने ?
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको आउँदै गरेको महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदार हो भन्ने सुनेको छु, के यो साँचो हो ? यदि मैले सुनेको कुरो साँचो हो भने तपाईं एनआरएन युकेको अध्यक्ष बन्न पर्ने कारणहरु तथा ऐजेन्डाहरु के के छन् बताइदिनुहोस् न ?
एनआरएनए युकेको सातांै महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको दाबेदारको सन्दर्भमा मैले विगतमा महासचिव र वर्तमान उपाध्यक्षको पद र मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । यो अवस्थामा मैले संघप्रति दिएको योगदानले पनि त्यो भन्दा आकर्षक विकल्प नहोला र यो मेरो चाहना पनि हो, एनआरएनएका अभियन्ताहरुले पनि यो महसुस गरिसक्नु भएको होला । अन्ततः यो मेरो चाहना रहँदैमा एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने हँुदा म संलग्न सबै संस्था, अन्य संस्थाहरु र एनआरएनए अभियानताका अग्रजहरुको परामर्श र सुझाव लिनेक्रममा अगाडि बढ्न संकेत आइसकेको छ । उहाँहरुले दिनुभएको आश्वासनप्रति पूर्ण समर्थन रहनेमा पूर्ण विश्वस्त छु । मलाई अर्को स्टेप चाल्न थप हौसला मिलेको छ ।
मैले मेनोफेस्टोमा तत्कालका एजेण्डाहरु विशेषतः दुई भागमा विभाजन गर्ने छु, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् । यी दुवै तहमा प्राथमिकताअनुसार हाम्रो कार्य अगाडि रहने छ । विशेषतः यो संस्थालाई बेलायतस्थित सांगठनिक सबै संस्थाहरुलाई अपनत्व महसुस गराउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहने छ । बेलायतस्थित सांगठनिक सबै संस्थाहरुलाई आ–आफ्नो स्थान दिन पहल गरिने छ र उहाँहरुले अहिलेसम्म गर्नुभएका उदाहरणीय कार्यको स–सम्मानसहित एनआरएनए युके सबैको साझा संस्था बनाउनेमा हाम्रो प्रयास रहने छ ।
एनआरएनए युके सबैको साझा संस्था रहने छ । हामीजस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले पनि यो संस्थालाई परिमार्जित गरी क्षमतावान् र इच्छावान व्यक्तिहरुले पनि एनआरएनको नेतृत्व गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने यो अभियान सफल बनाउन पनि हाम्रो आवश्यकता देख्दछु । समाजलाई आर्थिकमुक्त गर्न धनाढ्य व्यक्तिहरुको आवश्यक सदा रहने पनि छ । समाजलाई पनि उहाँहरुको आवश्यकता छ । तर, यो भन्दैमा क्षमतावान र इच्छावान व्यक्तिहरुलाई पनि धनराशिको कमी देखाइ बन्देज गराउन भने हुँदैन ।
विगतमा हामीले धेरै महान् कार्यहरुको सपना र मेनोफेस्टो दियौं । त्यो पूरा गर्न कहाँसम्म सक्षम भयौ, यो आग्नै ठाउँमा छ । तर, अबको कार्यसमितिले थोरै आस्वाशन दिने र पूरा गर्नेछ । योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने छ । पल्टने व्यक्ति भाषण र वचनलाई भन्दा काम गरेर देखाउनेमा विश्वास गर्छ, यो अबको सातांै कार्यसमितिले देखाउने छ ।
एनआरएन युके भनेपछि लफडा मात्र मच्चाउने, फोहरी खेल खेल्ने एउटा एलिटहरुको संस्थामा हो भनेर चिनिन्छ यो अधिवेशनमा पनि लफडा नहोला भन्न तथा फोहरी खेल नखेलिएला भन्न सकिन्न, यदि लफडा भए भने के गर्नुहुन्छ ?
युकेमात्र नभई एनआरएनए विश्वका ७४ देशमा सांगठनिक संरचना छन् । यो नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त विदेसमा बस्ने नेपालीहरुको एकमात्र छाता संस्था हो । संस्थाको वृद्धि र संरचनाअनुरुप नयाँ परिकल्पना, सोचहरु आउँछन् । र, आउनु पनि पर्ने हुन्छ । परिवर्तित समयअनुसार पुराना र नयाँमा केही लफडा नहोला भन्न सकिँदैन । नभएका भन्न पनि सकिँदैन । एउटा ज्वलन्त उदाहरण, गत दुई वर्ष पहिलाको महाधिवेशनमा यो नभएको होइन । कमीकमजोरीदेखि पाठ सिकिन्छ । हामी सिक्ने कर्ममा पनि छांै । यसमा व्यक्तिगत वा समूहलाई दोष दिन पनि चाहँदैनौ । जुन हजारौंको संख्यामा दर्ता सदस्यहरुलाई न त सदस्यता नम्बर दिन सक्यौ न त दर्ता शुल्क फिर्ता गर्न सक्यौ । यो कमजोरी भने भएकै हो । जो सानो संस्थाहरुमा पनि देखिने र हुने गर्छन् । तर, फोहोरी र सफा कस्तो संस्था हो नजिकदेखि चिन्ने कोसिस गरिदिन म अनुरो गर्छु । विगतमा त्यस्ता नराम्रा घटना भएको थियो भने अब भने कदापी हुने छैन । यो संस्थालाई फोहरी खेल खेल्ने एलिटहरुको संस्थादेखि बञ्चित गराउन पत्रकार मित्रहरुको पनि जिम्मेवारी रहन्छ ।
लफडा र फोहरी खेल हामी नेपाली समुदायभित्र खेलिनु हुँदैन र कुनै स्वार्थ राख्नु हुँदैन । किनकि हामी बाँच्न र समाजमा धेरै वर्ष रहनुपर्छ । अनि हामीले क्षणिक स्वार्थपूर्तीको लागि कालान्तरसम्म असर गर्ने कार्यहरु गर्नु हुँदैन र दिन पनि हुँदैन । हामीले केही परिवर्तन ल्याउ र परिवर्तित समाजको सिर्जना गरौं ।
यस्तो लफडामात्र मच्चाउने, फोहरी खेलमात्र खेल्ने एलिटहरुको संस्थामा किन अध्यक्ष बन्न मन लाग्छ ? प्रस्ट पारिदिनुहोस् न ।
लफडामात्र मच्चाउने, फोहरी खेलमात्र खेल्ने इलेटहरुको संस्थाभन्दा पनि यो हामी सबैको साझा संस्था हो । विगतमा हाम्रै कमीकमजोरीका कारणले विकृति देखिए पनि अब हामी सबै सक्षम बेलायतवासी नेपालीहरुको कर्तब्य र जिम्मेवारी हो, फोहोरी खेल हुन नदिने । संस्था स्थापनाकालदेखि हालसम्म स्थानीय नेपालीहरुको लागि होस् वा नेपाल सरकार र नेपालीहरुको लागि आपत र विपद् कालखण्डहरुमा होस् उदाहरणीय कार्यहरु गर्दै आएको छ । मैले अहिलेसम्म समाजमा गरेको कार्यहरुलाई मनन गरेर बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुले एकपटक यस संस्थाको अध्यक्ष बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । विगतमा अञ्जानमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्दै भविष्यमा बेलायतमा सांगठनिक संस्थाहरुको परिचालनसहित नयाँ परिमार्जित साझा संस्था बनाउने मेरो रहर पनि हो ।
विश्वास गर्नुस्, म अध्यक्ष भएको अवस्थामा बेलायतस्थित प्रत्येक सांगठनिक संस्थाहरुमाझ पुग्ने छु । स्थापनाकालदेखि हालसम्म यस संस्थाले गरेको कार्यहरु समूह समूहमा पु¥याउने छु । लफडा र फोहोरी खेल खेल्ने संस्था हो वा होइन प्रस्ट पारि दिन्छु ।
मैले नसोधेको तथा तपाईंलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरु छन् भने भनिदिनुहोस् न ?
गैरआवासीय नेपाली संघ एक गैरराजनीतिक र गैरनाफामूलक नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र सामाजिक संस्था हो । यो संस्थामा विदेशमा दुई वर्षभन्दा बढी बस्ने नेपालीमुलका नेपाली नागरिकहरु सदस्य हुने प्रावधान छ । बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिकांक्ष भूपू गोर्खा र उनका सन्ततिहरुको सन्दर्भमा फरक विश्लेषण रहे तापनि अहिलेसम्म अधिकारिक पूर्णता नभएको र संविधानमा दर्साइएको नहुँदा भूपू गोर्खाहरु एक भई गोर्खा सांगठनिक संस्थाहरु वा गैरआवासीय नेपाली संघदेखि पनि केही पहल गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु । अन्ततः एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली यो संस्थाको मूलमन्त्र नै हो । अभियान जारी छ र रहने पनि छ ।
जिन्दगी के हो जस्तो लाग्छ ?
जिन्दगी एक दिन मरी जाने जीवन हो । आज हो वा भोलि ? हामी मरेर जाने निश्चित छ । त्यो कसैदेखि अछूतो छैन । तैपनि हामी एकापसमा रिस, इबी, घृणा र तृष्णादेखि टाढा रहन सक्दैनांै । हामी बढी धन कमाउनेमा ध्यान दिन्छौं तर हामीलाई यो थाहा छैन कि हामी मरेर लैजाने केही होइन । धनको साथसाथै सामाजिक नाम पनि रहोस् ताकि पछि सन्ततीले तपाईंको नाम सम्झन सकुन् । मरेर जाँदा धन होइन, नाम लिएर जाने हो । जिन्दगीमा कि आफूले गर कि अरुलाई गर्न देउ । होइन भने गर्ने मान्छेको समर्थन गर, खुट्टा तान्ने काम नगर भन्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, युके तथा संसारभरि छरिएर बसेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई केही सन्देश छ कि ?
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले यस कार्यकालको लागिमात्र (२०१७–२०१९) काठमाडौंमा निर्माणाधिन गैर आवासीय नेपाली संघको एकमात्र साझा सम्पत्ति एनआरएनए भवनको लागि केही कारणवस अपुग रकमको लागि थप सदस्यता शुल्क बढाएको छ । भवन निर्माणको लागि पूर्ण रकम सहयोग गर्न सक्षम व्यक्तिहरु संस्थामा नभएको होइन तर पनि यो भवनमा धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरुको सानो सहयोगको योगदान रहोस् । जहाँ हामी सबैले भवनको आफ्नोपन महसुस गर्न पाउँ भन्ने हेतुले पनि नवीकरण वा नयाँ सदस्यता बन्ने सदस्यहरुलाई २५ पाउन्ड यो कार्यकालको लागि तोकिएको छ । जसमध्ये १० पाउन्ड तपाईंको सिधै एनआरएन भवन नेपालको लागि जाने प्रावधान छ । समयसांक्षेप र पारदर्शीकरण बनाउनलाई अहिले केन्द्रदेखि नै सदस्य दर्ताको लागि अनलाइनमार्फत् गर्नुपर्ने छ । एनआरएनए युकेको सन्दर्भमा सदस्यता दर्ता अन्तिम मिति आइतबार ६ अगस्ट २०१७ रहेको छ । संस्थाको सातौं अधिवेशन शनिबार ९ सेप्टेम्बर २०१७ मा अल्डरसटमा हुने छ । त्यसमा प्रत्यक्ष भोटिङ हुने छ ।
संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै सामाजिक तथा मानवीय कार्यहरुको लागि धेरै अतुलनीय कार्यहरु गर्दै आएकाले पनि यस संस्थाको सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता बनी नेपालमा निर्माणाधिन एनआरएनए भवन बनाउन तथा एनआरएनए युकेको भावी उम्मेदवारको लागि छनौट गर्ने गरिमामय भूमिका बेलायतवासी नेपाली बाबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको रहने छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु । साथसाथै धेरैभन्दा धेरैले समयमै सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता बनी आफ्नो अमूल्य भोट सुरक्षित गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु ।
अन्तमा मनमा लागेका मेरो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईंलगायत एभरेष्ट टाइम्सप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।